ကမ္ဘာဦးအစက ခုမှရောက်လာတဲ့သီချင်း | ဥက္ကာကိုကို
ကမ္ဘာဦးအစက ခုမှရောက်လာတဲ့သီချင်း	Posted by oakkarkoko on August 18, 2010
Posted in: ကဗျာ.	5 Comments
ကျနော်က သူမကို ကလေးလေးလို့ခေါ်ရင်
သူမက အပျော်မြစ်ထဲ လက်ပစ်ကူးတယ်
ဘယ်သူ့ကို ဘယ်သူမှ ကြိုးဆွဲမခံကြဘူး
ဒါပေမယ့် သူမနဲ့ကျနော့်ကြားမှာ ကြိုးတစ်ချောင်းရှိရဲ့
ပြတ်လိုက် ပြန်ဆက်လိုက်နဲ့ ဆက်ထုံးများတဲ့ကြိုးလေးပေါ့။
အိုဘားမားနဲ့ကျနော် ဘီယာချိန်းသောက်တာကို သူမ မကြိုက်ဘူး
ရိန်းနဲ့သူမ တွဲကမှာကို ကျနော်မလိုလားဘူး
အဲဒီလို အကြောင်းတရားလေးတွေက အကျိုးတရားတွေဖြစ်လာတဲ့အခါ
သူမက ကျနော့်ရဲ့ နိုင်ငံရေးသတ္တ၀ါ
ကျနော်က သူမရဲ့ မော်ဒန်အချစ်ဟာသ၀တ္တု
ဘယ်သူမပြုမိမိမှုတွေကြားမှာ ဘယ်သူမှမပြု အလိုလိုပြုလာတဲ့
ပြု ဖြစ် ပျက် တွေအကြောင်း
သူမကို နားမချခဲ့လို့ သူမက ကျနော့်ကို နားမ၀င်ခဲ့ဘူး
နောက်တစ်ကြိမ်က ကျနော့်ရင်ဘတ်ထဲက ၀ှက်ဖဲ
သူမ မျက်မှန် ပါဝါများတယ်
ကျနော့်အကြောင်းတွေ သူမ အရမ်းသိချင်တယ်
သူမ အကျီ င်္တချို့ လည်ပင်းဟိုက်နေတယ်
ကျနော်လိုက်လေလေ သူမက ပြေးလေလေ
နောက်တော့လည်း စိန်ပြေးလိုက်တမ်းကစားနည်းကို ရွံ့လာတယ်
တကယ်တော့ သူမက ကျနော့်ရဲ့ပြက္ခဒိန်
အချိန်မသိဘူး နေ့စွဲမရှိဘူး ဘာလမှန်းမေ့နေတယ်ဆိုပေမယ့်
သူမ ကိုမြင်တိုင်း ရင်ဘတ်ထဲမှာနှိုးစက်သံတွေ
ကံကြမ္မာက မကျွမ်းကျင်တဲ့ မျက်လှည့်ဆရာကွယ့်
အမှားမှားအယွင်းယွင်းတွေလည်း ခဏခဏ မကြာမကြာ
သူမ ချစ်တဲ့ခွေးရုပ်လေးတွေ နေကောင်းပါရဲ့လား
ကျနော့် အိပ်မက်တွေ တဖြုတ်ဖြုတ်သေတယ်
သူမ ပျော်ရွှင်လင်းပစွာ ဆော့ကစားပါစေ။
တနင်္ဂနွေသားဖြင့် ထုဆစ်ထားသော သချို င်္င်းမှတ်တိုင်များ
တစ်နေ့မှာ ကျနော်သွားရမယ် ကလေးလေးရေ…..
ခုတော့ …. ၀င့်ကြွားမှုတလူလူနဲ့
ကျနော့်လက်မောင်းကို သူမ ဖျစ်ညှစ်တတ်လာတယ်
ခုတော့ …. အသစ်အသစ်သော စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့
မြူခိုးဝေတဲ့လမ်းကြမ်းတွေကို သူမ နမ်းရှိုက်တတ်လာတယ်
သူမ… ဘေးကင်းပါစေသား။ ။
← ကျနော်နှင့် တိုက်ပွဲခေါ်သံ	မောင်ဥက္ကာနေမကောင်းဘူး →	5 comments on “ကမ္ဘာဦးအစက ခုမှရောက်လာတဲ့သီချင်း”
zuzu on July 1, 2012 at 6:01 pm said:
အ၇မ်းဖတ်လို့ ကောင်းတယ်နော် အ၇မ်းလဲ ကြိုက်ပါတယ်
Your Baby on June 3, 2012 at 4:57 pm said:
I miss …….. Wish u all the best my baby…
vzty109 on August 19, 2010 at 4:08 am said:
BN on August 19, 2010 at 3:51 am said:
good poem but i don’t like title :)
မဗေဒါ on August 18, 2010 at 1:19 pm said:
မောင်ကိုကို မရေးတာကြာပြီပဲ.. ။
`ကျနော်ရဲ့ ဝတ်ပြုသံ`နဲ့ သူ ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးကို ကောင်းတာတွေပေးမယ်လို့ ယုံကြည်မိပါရဲ့..။